Vodafone inoratidza kuti yayo 4G network muSpain inogona kushandiswa kudzora traffic yemhepo kune drones | Mahara emahara
Vodafone inoratidza kuti yayo 4G network muSpain inogona kushandiswa kuitisa mhepo traffic kudzora kune drones
Vodafone achangobva kuratidza panguva yeMobile World Congress kuti nhasi varipo uye vane tekinoroji inodikanwa kuti vatange kuendesa yavo nyowani 5G network muSpain. Kunyangwe ichi chitsva, ivo vatangawo kukwidza nyaya inogona kunetsa vatungamiriri vazhinji, senge iyo airspace kutonga vanoshandisa drones, chimwe chinhu chavanopikira kuti vanogona kuita vachishandisa yavo 4G network.
Sezvanga zvichitarisirwa, ichi chikumbiro chakagamuchirwa kwazvo nemamwe masangano, zvekuti Vodafone yatanga kushanda pamwe ne European Aviation Kuchengetedza Agency mukuzadzikiswa kweakateedzana ebvunzo dzinozoitika kuGerman neSpain. Sehuwandu, ndikuudze iwe kuti usvike pano, Vodafone yaifanirwa kuratidza kushanda kwechirongwa chayo mune kumwe kuyedza kwekutanga kwakaitwa zvinobudirira muSeville gore rapfuura.
Vodafone inoratidza kuti yayo 4G network inogona kushandiswa muSpain kudzora kushandiswa kwenzvimbo yemhepo nemabhizimusi drones
Munguva iyi yekutanga bvunzo, Vodafone yakaratidza kuti yayo 4G network ine inokwana kugona ku kudzora drone inorema 2 kilos. Chinangwa chaicho mukushandisa iyi network ndeyekuchengeta matekinoroji ese uye tekinoroji yekuchengetedza inowanikwa mukushambadzira seya2019.
Panguva ino, yakakosha poindi inofanirwa kutariswa uye ndiko kuti chikuva ichi haina kuitirwa kuteedzera uye kudzora yakavanzika drones, asi izvo zvekushandisa zvebhizimusi uye izvo, mukuwedzera, ndezvehukuru hukuru. Chimwe chinhu chakakosha ndechekuti netiweki yakagadzirirwa kuteedzera drones kusvika pakukwirira kwemamita mazana mana, kukwira kwainogona kumanikidza mudziyo kuti uburuke nekuti unogona kukanganisa nzira yendege dzekutengesa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mahara emahara » Drones » Vodafone inoratidza kuti yayo 4G network muSpain inogona kushandiswa kuitisa mhepo traffic kudzora kune drones
Ndatenda nenyaya dzenyu, mune iyo 3D anodhinda maitiro aunopa akanaka kwazvo. Ini ndinoshandisa Shumba 2 uye inoshanda mushe, zvakare, chiSpanish uye nekudaro rubatsiro rwuno runoshamisa
Pindura kuna Mai
Porsche inoshandisa 3D kudhinda matekinoroji kugadzira zvikamu zvemota dzayo dzekare
Keratin, yakakodzera protein protein yekushandisa mu3D maprinta